MotorolaMoto 360 2nd gen Smart Watch (42mm) – ရွှေနှင်းဆီရောင် + Blush Leather | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners TOP BRANDS NUBY Mamy Poko စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းများ စကိတ်ဘုတ်များ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စမတ်နာရီများ Motorola Moto 360 2nd gen Smart Watch (42mm) – ရွှေနှင်းဆီရောင် + Blush Leather Motorola Moto 360 2nd gen Smart Watch (42mm) – ရွှေနှင်းဆီရောင် + Blush LeatherBy Motorola (4) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများCall us back on 01-8604371, 09-970140004One Year Official WarrantyDimensions: 42 x 42 x 11.4 mm (1.65 x 1.65 x 0.45 in)Build: Stainless SteelIP67 certifiedDust and water resistant Motorola ဆိုင်သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Ks 461,040 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ Motorola Myanmar ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ အာမခံချက် ပစ္စည်းအာမခံ အကြောင်းဖတ်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ One Year ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (4)4 မှတ် (0)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 54 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန် ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်အားလုံးဖြိုးသူ2016 ဩဂုတျ 16 Motorola smart watchစတိုင်လည်းကျ ဒီဇိုင်းလည်းမိုက်တဲ့ နာရီလေးပါ။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်မင်းအောင်မြင်2016 ဇူလိုငျ 25 MotorolaMotorola က ရွှေရောင် နာရီလေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ နံပါတ်မပါတာလေးက တစ်မျိုးစွဲဆောင်မှုရှိစေသလိုထင်ရတယ်. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်နွဲ့ဒါလီထွန်း2016 ဇှနျ 25 love it!!!!!ဒီဇိုင်းလှပြီး ဖုန်းလိုလဲအကုန်သုံးလို့ရလို့ ကြိုက်တယ်။ အဓိကကြိုက်တာကတော့ ဖုန်းဒီဇီုင်းပါ..တစ်ခြား smart watch တွေဆိုရင် လှဘူးဒီလောက်..ဟဲဟဲ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် information များကို ရရှိနိုင်ခြင်းMoto 360 စမတ်နာရီသည် သင်အနှစ်သက်ဆုံး Google services များကို သင့်ဆီသို့ ယူဆောင်လာပေးမှာ ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ဖုန်းကို အမြဲတမ်းကြည့်နေစရာမလိုဘဲ အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Android Wear™ ကိုထည့်သွင်းထားသဖြင့် သင့်ဆီသို့ ပို့လိုက်သော gmail မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် calendar invites များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ ထို့ပြင် Google maps ကနေတဆင့် လမ်းညွှန်မှုများကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။သင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုအမြဲစောင့်ကြည့်ပေးနေသော Moto BodyMoto 360 စမတ်နာရီ ၌ ပါဝင်သော activity tracker သည် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအား နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စနစ်ကျသော နည်းလမ်းကောင်းများကို ပေးစွမ်းပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။Spotify ဖြင့် တေးသံစဉ်များကို နားထောင်လိုက်ပါ။Moto 360 လက်ပတ်နာရီမှတဆင့် Spotify ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ဖုန်းကို အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ သီချင်းရပ်ခြင်းနှင့် အသံချိန်ညှိခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။Wi-Fi ချိတ်ဆက်နိုင်မှုMoto 360 ဖြင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် သင့်ဖုန်းကို ဘယ်နေရာသွားသွား ယူဆောင်သွားစရာ မလိုတော့ပါ။ Wi-Fi ရှိသည့်မည်သည့်နေရာမျိုးမှာမဆို Moto 360 စမတ်နာရီပေါ်၌ Notification နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများကို လက်ခံကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သင့်စမတ်နာရီအား အသံအမိန့်ပေးစနစ်ဖြင့် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ အဓိက အကြောင်းအရာများCall us back on 01-8604371, 09-970140004One Year Official WarrantyDimensions: 42 x 42 x 11.4 mm (1.65 x 1.65 x 0.45 in)Build: Stainless SteelIP67 certifiedDust and water resistantWater resistant up to 1 meter and 30 minutesCompatible with standard 22mm strapsCompatible with standard 16mm straps (women model only)Display Type: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colorsDisplay Size: 1.37 inches (~61.9% screen-to-body ratio)Resolution: 360 x 325 pixels (~263 ppi pixel density)Multitouch: YesProtection: Corning Gorilla Glass 3OS: Android Wear OSChipset: Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7GPU: Adreno 305Internal Storage4GB, 512 MB RAMAlert types: Vibration; MP3, WAV ringtonesWLAN: Wi-Fi 802.11 b/gBluetooth: v4.0, LEFeatures: Sensors	Accelerometer, gyro, heart rateMessaging: SMS, Email, IMBattery: Non-removable Li-Ion 300 mAh batteryAdditional shipping fees will be charged.ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Moto 360 2nd gen Smart Watch (42mm) – ရွှေနှင်းဆီရောင် + Blush Leather SKUMO144EL18BRJ4NAFAMZ မော်ဒယ်လ်Moto 360 (42mm) 2nd gen Weight (kg)0.15 ColourRose Gold Internal Memory(GB)4 CPU Speed (GHz)1.20 Number of CPUs4 Product warrantyOne Year ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။